Ámá egwuregwu Al Salam dị na Cairo mba Ijipt - bụ ebe ndị otu egwu bọọlụ Naijiria, Ugo Kara aka, nọrọ merie mba Tunisia were mabute Ọla nchara na 2019 AFCON - bụ ebe anọrọ malite egwu bọọlụ ndị otu B nke dị n'etiti ndị ji ya bụ Iko, Naijiria na ogbo ha Ivory Coast, dịka onye ọ bụla na-azọ ịsonye na Iko Olympic na 2020.
Onyeisi otu egwu bọọlụ ahụ bụ Azubuike Okechukwu na ọgbaniihu Taiwo Awoniyi bụ ndị esoghị otu egwu bọọlụ Naijiria na erubeghị afọ iri abụọ na atọ iji gbapụta isi ha na iko ha buru n'afọ 2015 na mba Senegal, dịka otu egwu bọọlụ ha na mba Yuropu ekweghị ahapụ ha maka asọmpi ahụ. Kama a na-ele anya na mmadụ abụọ ndị a ga-esonyere ndị otu ha tupu ụbọchị Tuzdee ha ga-ezute Zambia.
Naijiria, bụ ndị bu ya bụ Iko a na-azọ, gbara ọnyụpa n'aka mba Cote d'Ivoire ka ejiri otu ọkpụ asataghị chaa were merie ha n'ehihie Saturday. Silas Gnaka nyere ya bụ goolu site na adọba agba penariti na nkeji iri isii na asatọ ngwangwa ndị Naịjirịa fọrọ nanị mmadụ iri dịka Ilisa Ndah nwetara akwụkwọ edo edo nke abụọ ka ọgbatụsiri Youssouf Dao nke ojiri pụọ.
Naijiria gbara mbọ ka ha sata goolu ahụ mana oge gbanarịrị ha. Ha na-elezi anya imeri asọmpi abụọ fọdụrụ.